Fivavahana | Desambra 2021
azoko atao ve ny manova ny adiresy mailaka an'ny apple apple
paoma iphone 6 vidin'ny fanimbana rano
bokotra fanidiana iphone 5 heny
asa any New York raha tsy misy taratasy
Ity misy 50 amin'ireo tsipika Kristiana mahatsikaiky tsara indrindra
Ity misy 50 amin'ireo tsipika Kristiana mahatsikaiky tsara indrindra. Na dia mety mikorontana amin'ny volanao aza ny namanao ao amin'ny tarika kelinao, dia mety hihomehy mafy sy hizara ny olona an'arivony taona
VAVAKA mahery ho an'ny marary
Eto amin'ity pejy ity ianao dia hahita teny nalaina avy amin'ny aingam-panahy sy vavaka ho an'ny marary mba hovakinao rehefa tsy salama sy marary ianao. Manomboka amin'ny teny fanasitranana avy amin'ny Baiboly ka hatramin'ny fahazoana tanjaka
Ahoana no ahafahanao mangataka ny ran'i Jesosy amin'ny vavaka noho ny zavatra ilainao manokana?
Ny fangatahana ny ran'i Jesosy mpilalao dia iray amin'ireo teknika tena tsara indrindra hivavahana efa henoko. Raha mampiditra ny ran'i Jesosy amin'ny Ray Andriamanitra amin'ny vavaka aho,
Ny marina momba ny fanarenana ara-panahy ao anatin'ny 3 minitra
Ny famerenana amin'ny laoniny dia tsy maintsy tanterahin'ireo olona mahafeno fepetra ara-panahy. Rehefa tsy vita amin'ny ivom-pinoana misy fahalemem-panahy sy fahendrena ilay olona
Ny dikan'ny litera ao amin'ny Baiboly hebreo
Dikany abidy hebreo.
Ny dikany an'ohatra amin'ny hazofijalian'i Jesosy
Ireo evanjelista efatra dia manoratra momba ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana tao amin'ny Baiboly. Ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana dia tsy fomba jiosy hamonoana olona. Ny Romana dia nanana